नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर, गम्भीर खालको संक्रमणले मृत्युदर बढ्ने त्रास
युवा पुस्ता मात्र होइन बालबालिकासमेत जोखिममा
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७७ चैत्र २८, शनिबार ०९:१७
नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु भए सँगै सङ्क्रमितहरूमा गम्भीर प्रकारको सङ्क्रमणले मृत्युदर बढ्न सक्ने त्रास देखिएको छ । पछिल्लो पटक प्रत्येक दिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा उनीहरूमा नयाँ भेरियन्टको कोरोना देखिएको र अधिकांश सङ्क्रमितको अवस्था गम्भीर देखिएको शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टर तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा. अनुप बाँस्तोला बताउँछन् ।
अहिले देखिएको नयाँ प्रकारको भाइरस चाँडै सर्ने भएकोले मृत्युदर पनि उच्च रहेको डा. अनुप बास्तोलाको भनाई छ । उनका अनुसार अस्पतालमा विगत १० दिन यता सिकिस्त सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । सिकिस्त सङ्क्रमितमध्ये पनि यो महिना ५० वर्ष मुनिका बिरामी ५०% कै हाराहारीमा छन् । जुन अघिल्लो ३ महिनाको तुलनामा सङ्ख्यात्मक हिसाबले दोब्बर जत्तिकै हो । डा.बास्तोलाले भने, “अहिले पत्ता लागेका सङ्क्रमितमध्ये सिकिस्त सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ । यसको अर्थ, समुदायमा पत्ता लागेका भन्दा धेरै व्यक्ति सङ्क्रमित भइरहेका छन् भन्ने हुन्छ । यी सङ्केतहरूले समुदायमा कोरोना भाइरसको दोस्रो छाल व्यवस्थित भइसकेको पुष्टि गर्छ ।”
टेकु अस्पतालको आइसियुमा भर्ना हुने बिरामीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको डा. बास्तोलाले जानकारी दिए । “पछिल्ला केही हप्ता सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छैन, तर अहिलेको सिकिस्त बिरामीको चाप यही गतिमा बढ्ने हो भने २–३ हप्ताभित्र मृत्युदर बढ्ने आङ्कलन गर्न सकिन्छ “, उनले भने । पछिल्ला दिनमा प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणमा ’एस जिन टार्गेट फेलियर’ (एस जिन नेगेटिभ) को सङ्ख्या बढी देखिएको बास्तोलाले बताए ।
जसले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति (युके भेरियेन्ट) समुदायमा फैलिरहेको छ भन्ने विश्वसनीय आधार दिन्छ । डा.बास्तोलाले भने, “विश्वव्यापी उदाहरण हेर्ने हो भने, कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति (युके भेरियेन्ट) बढी सङ्क्रामक र मृत्युदर उच्च रहेको मान्ने आधार प्रशस्त छन् । कोरोना भाइरसको पछिल्लो सङ्क्रमणको विशेषता हेर्दा नेपालमा पनि नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमण भुसको आगोजस्तो सल्किँदै गएको मान्न सकिन्छ ।”
कोरोना भाइरसको पहिलो छालमा जेष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी जोखिममा थिए भने दोस्रो छालमा युवा पुस्ता मात्र होइन बालबालिकासमेत जोखिममा देखिएका छन् ।
विद्यालयलगायत भिडभाड हुने अन्य क्षेत्र सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस बन्द गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरे हो । पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको दैनिक सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ । शुक्रवार मात्रै नेपालमा २ सय ८८ जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । यस्तै ८ चैत यता दुई सयभन्दा बढी बालबालिका सङ्क्रमित भइसकेका छन्  ।